Ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke
Mma na ike Ntu nwanyi
Dị ka a maara, na mmalite nke mmekọahụ na usoro ọmụmụ nwa nwanyị na-enwe mgbanwe ụfọdụ. Nke mbụ, ọ na-eche gbasara ikpu nke gbanwere. Ka anyị lebakwuo anya na akụkụ a nke usoro ịmụ nwa, na karịsịa, anyị ga-ebikwa na ọnọdụ nke ikpu nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke.
Atụmatụ nke ọdịdị nke ikpu na ụmụ agbọghọ
Ya mere, n'ime ụmụ nwanyị a mụrụ ọhụrụ, ogologo nke ngwa a bụ nanị 3 cm. Ọzọkwa, ọnụ ụzọ nke ikpu ahụ n'onwe ya dị omimi ma nwee ntụziaka na-ahụkarị. N'ile anya, ọ dị ka olulu.
Mgbidi nke ikpu na-ejikọta ibe ya nso. Ihe niile a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọkpụkpụ nke obere pelvis ka na-adịghị ike. Ihe dị ka afọ 1, ogologo ikpu na-abawanye site n'ihe dị ka 1 cm.
Naanị mgbe ọ dị afọ asatọ na ahụ a, a ga-achọta ihe a na-akpọ mpịakọta, nke bụ ihe ọ bụla maka ikpu nwanyị ọ bụla. Ọ bụ n'ihi mgbanwe ya na ogo nke ahụ na-arụ ọrụ, yana mgbe enwere mmekọahụ na ụmụ nwanyị.
Ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke malitere ihe dị ka afọ 10, ma site na afọ iri na abụọ ruo afọ 13, ọ ruru 7-8 cm.
Kedu ka ọkpụkpụ ahụ si gbanwee site na mmalite nke oge ntorobịa?
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere otú ikpu si yie nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, mgbe ahụ, na ọdịdị ya, enwere ike, njirimara naanị - hymen. Ọ bụ septum mucosal nke na-echebe akụkụ anụ ahụ nke anụ ahụ site n'aka ndị dịpụrụ adịpụ ma gbochie ịbanye n'ime ihe ndị dị n'ime ahụ. Na akpa mmekọahụ, e nwere nkedo nke usoro a, nke a na-ejikọta ya na ntakịrị obere ọbara.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere otu ụzọ ọnụ ụzọ nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke si ele anya, yabụ, dịka iwu, ọ dị obere karịa ndị inyom nwere mmekọahụ.
N'ozuzu, ikpu nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na nwanyị nwere ahụmahụ adịghị iche. Nha ya buru ibu, ogologo nke a na - emewanye obere, ọbụna mgbe a mụsịrị nwa ahụ. N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke glands na ndị inyom, a na-ahụ ọnụọgụ dị ukwuu nke mmanu mucous, nke dị mkpa maka moisturizing.
Ya mere, o nwere ike kwubie na mgbanwe dị ukwuu n'ime ụdị mmepụta ahụ dịka nwa na-eme na ntụziaka maka ịhụ na arụ ọrụ nke anụ ahụ. A na-eme nke a site n'ịba ụba nke ya, na mbụ, na-ekelekwa ọrụ nke usoro hormonal, n'okpuru mgbanwe nke mgbanwe a na-eme na nke a.
Protein na mmamịrị - ihe kpatara ya, nchọpụta na ọgwụgwọ proteinuria
Ọgwụ maka ịmị ọkụ na menopause
Ihe ịrịba ama nke ovarian mbufụt
Angelica ọgwụ na menopause
Pyelonephritis na ụmụ nwanyị - mgbaàmà na ọgwụgwọ ụdị ọrịa niile
Placental polyp mgbe medoborta
Diverticulum nke eriri afo
Mbadamba nkume nke ụmụ nwanyị
Urethritis na ụmụ nwanyị - mgbaàmà
Ngwá ọgwụ ọjọọ maka ụmụ nwanyị mgbe 40 gasịrị
Okpueze nke vulva
Enwere m ike ime ime ime mpụ?
Ube di omimi nke oma - ogwugwu
Ndị sneakers camouflage
Obi ike ma na-emegiderịta onwe ya: Natalie Portman gbara ajụjụ ọnụ na magazin Porter ma dekọọ rap na Andy Samberg
Duodenal duodenitis - mgbaàmà
Kedu otu esi ejide hypnosis?
Ụmụ anụmanụ ndị ị na-enwe mmechuihu
Mgbakwunye Nail 2015
Kedu ka esi emeso ọdịda hormonal?
Onye nkuzi ahụike
Eggplants na cheese
Nri Thai na mmiri ara ehi aki oyibo
Ogwe aka na "nti"
Ọrịa Sarcoptic na nkịta
Emeela ntị - ihe ị ga-eme?
Pịa maka nwamba nwamba
E nyere Hugh Laurie otu kpakpando na Hollywood Walk of Fame
Macaulay Culkin pụtara na ihuenyo na ọrụ a na-enweghị atụ
Lloret de Mar - nleta njem nleta
Esi esi esi nri ọkụ chakhokhbili?
Kedu ngwaahịa ndị nwere ọla kọpa?
Vegans na ndị anaghị eri anụ - ọdịiche
Ahụhụ na-akpata - kpatara na ọgwụgwọ